बागलुङमा जोखिममा आधारीत सुपरीवेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने – ebaglung.com
२०७४ चैत्र १७, शनिबार १६:१८	Top News, थप समाचार
सुमन जि.सी बागलुङ, २०७४ चैत १७ । बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाहरुको केन्द्रिय छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि. नेफ्स्कूनले विकास गरेको जोखिममा आधारीत सुपरीवेक्षण कार्यक्रम बागलुङमा सञ्चालन हुने भएको छ ।
संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठिमा जिल्ला स्वास्थ्य सहकारी संघ लि. बागलुङका अध्यक्ष सीता शर्मा, संघका लेखा समिति संयोजक महेन्द्र सिंह रायमाझी, कार्यक्षेत्र महिला साकोसका अध्यक्ष प्रमिला राजभण्डारी लगाएतले मन्तव्य राखेका थिए ।
बागलुङ र पर्वतका २५ वटा संस्थाका ४८ जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको स्वागत संघका सञ्चालक चीनीमाया काला मगर र सञ्चालन कोषाध्यक्ष वीरवहादुर किसानले गरेका थिए ।
पर्वत जिल्लाको ६ करोडको कृषि बजेटमा ४ करोड दुरुपयोग ?